हरेक देशका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय चरित्र हुन्छ । जस्तो जर्मनहरूको चरित्र कसैलाई समय दिएपछि ठीक समयमा पुग्नु हो । त्यस्तै इजरायलीहरूको चरित्र धेरै मिहिनेत गर्नु, फ्रेन्चहरूको चरित्र जीवनमा आनन्द लिनु हो । यस्तै नेपालीहरूको राष्ट्रिय चरित्र फोहोर गर्नु र थुक्नु हो भन्ने जस्तो लाग्दैन ? के कोरोनाविरुद्ध कदम चाल्दा ‘साबुनले हात धोउ र जता पायो उतै नथुकौं’ भन्ने नारा नेपालीले मान्लान् ?
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:५९